EsancharPati | » कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएपछि मानिसको शरीरमा के हुन्छ ?
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएपछि मानिसको शरीरमा के हुन्छ ? – EsancharPati
कोरोना भाइरसविरुद्धको सङ्घर्ष चिकित्सकहरूका लागि अनिश्चिततातर्फको यात्रा भइरहेको छ। यो भाइरसले शरीरमा कसरी आक्रमण गर्छरु यसका लक्षणहरू के हुन् ? सबैभन्दा गम्भीर रूपमा बिरामी पर्ने वा ज्यान नै गुमाउन सक्ने जोखिममा को हुन्छ ? यसको उपचार कसरी हुन्छ ?